काठमाडौं आउँदा सडकमै हुँदैछ स्वाब संकलन ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
काठमाडौं आउँदा सडकमै हुँदैछ स्वाब संकलन !
Published : 28 July, 2020 9:41 pm
पीसीआर परीक्षण भएन भनेर एउटा युवा समूहले अभियान नै बनाए– ‘इनअफ इज इनअफ ।’ पीसीआर परीक्षण बढाउन माग गर्दै यो युवा समुह स्वतस्फूर्तरुपमा सडकमा उत्रियो । ‘इनअफ इज इनअफ’ आन्दोलन सत्याग्रहसम्म पुग्यो र यो समुहका दुईजना अहिले पनि हनुमानढोका दरबार परिसरमा भोक हडतालमा छन् ।
अस्ति प्रहरीले गाडीबाट जर्बजस्ती झारेर परीक्षण गर्न लगायो भन्ने हल्ला पनि चलेछ’, अधिकारीले भने, ‘त्यसैले हामी परीक्षण गराउनुस् भनेर आग्रहमात्र गर्छौं । परीक्षण गर्दा सबैलाई राम्रो हुने भए पनि धेरैजना अनिच्छुक भेटिन्छन् ।परीक्षणको आवश्यकता बुझ्नेहरु भने बाटैमा स्वाव दिन पाउँदा खुसी भएका छन् । सवारी चालकहरुलाई पीसीआर परीक्षण गराउन नभने पनि पाएको सुविधा उपयोग गरौ भनेर आफै लामवद्व हुनेहरु पनि देखिए ।
एउटा टाटा सुमोका यात्रुहरुलाई स्वास्थ्कर्मीले स्वाव लिन लाइनमा राखेपछि त्यसका चालकले पनि प्रहरीलाई आफूले पनि कोरोना परीक्षण गर्न चाहेको बताए । प्रहरीले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई सोध्न भने । स्वास्थ्यकर्मीले परीक्षण गराउन पाइन्छ भनेपछि ती चालक यात्रुहरु उभिएको नाम दर्ता गराउने लाइनमा गएर उभिए ।लागेको रहेछ भने उपचार हुन्छ, रहेन छ भने ढुक्क’, उनले मिडिया सँग भने, ‘यति सजिलै परीक्षण गर्न पाउँदा देशमा सरकार रहेछ भनेर खुसी लाग्यो ।’